Indawo: Ikhaya » Ukuthumela » Iindaba zocingo » IiNdlela ezi-6 eziPhezulu zeTekhnoloji yokhathalelo lwempilo ngo-2022
Ukusukela ngo-2022, ubukho be-COVID-19 busaqhubeleka kwihlabathi liphela. Oko kuthethiweyo, kubalulekile ukuhlala ukhumbula iindlela zobuchwepheshe eziqhuba inguqu yedijithali. Iingcali zeMobiDev zidwelise ezona zinto zibalulekileyo zetekhnoloji yezempilo enefuthe kushishino ngo-2022.
I-Trend 1 Intelligence Artificial in Healthcare
Kwishishini lezempilo, ukufundwa koomatshini kunceda kakhulu ekuphuhliseni amayeza amatsha kunye nokusebenza kakuhle kweenkqubo zokuxilongwa. I-AI inceda ukuhlalutya i-CT scans ukufumanisa inyumoniya. Ukukhankanya impilo yengqondo, iMIT kunye neYunivesithi yaseHarvard abaphandi basebenzise ukufunda koomatshini ukulandelela iintsingiselo kunye nempilo yengqondo ngokuhambelana nobhubhane we-COVID-19.
I-Trend 2 Telemedicine
I-Telehealth ilindeleke ukuba ikhule ibe yi-185.6 yeebhiliyoni zeedola ngo-2026. Ukuba ufuna i-telemedicine app ezinikeleyo, enye yeyona teknoloji ibalulekileyo eya kufuneka i-WebRTC, inkqubo esekelwe kwi-API evulekile.
Enye yezona ndlela zidumileyo neziluncedo zobuchwephesha kukusetyenziswa kwee-headsets ezixubeneyo ezifana neMicrosoft Hololens 2 ngoogqirha botyando. I-headset inokubonelela ngeentloko ngolwazi kugqirha ngelixa uvumela ukuba basebenzise zombini izandla zabo ngexesha lenkqubo.
Umzila 4 IoT
Imakethi yehlabathi yezixhobo zonyango ze-IoT kuqikelelwa ukuba ifikelele kwi-USD 94.2 yeebhiliyoni ngo-2026 ukusuka kwi-USD 26.5 yeebhiliyoni ngo-2021. Ngeshishini lezempilo lisiya liqhagamshelwa ngakumbi ngobu buchwepheshe, i-IoT ayinakungahoywa.
I-Trend 5 yaBucala kunye noKhuseleko
Ukuqinisekisa ukuba umbutho wakho uyahambelana ne-HIPAA linyathelo lokuqala elibalulekileyo ekuthinteleni ukophulwa kwedatha okunexabiso eliphezulu. Ukuba ukhonza izigulane kumazwe ngamazwe, kunokuba yinto efanelekileyo yokuqwalasela imigaqo yoMthetho woKhuseleko lweDatha Jikelele (GDPR) kwi-European Union.
I-Trend 6 ye-Organ Care kunye ne-Bioprinting
Ngobukhulu bemarike yehlabathi yotyalo-mali oluqikelelwe ukuba luza kufikelela kwi-26.5 yeebhiliyoni zeedola ngo-2028, ukutshintshwa kwamalungu ngokuqinisekileyo yinxalenye ebalulekileyo yoshishino lwezempilo. Inkqubo yoLondolozo lwe-Organ eyenziwe yiTransmedics ngumzekelo omhle. I-Bioprinting yenziwe kwixesha elidlulileyo kodwa ayikafiki eyona nto iphambili.
Oku ngakumbi: Technology | Covid-19 | Microsoft
Uvavanyo olutsha lweklinikhi lwe-Opioid Use Disorder
Umqhubi we-ITA Airways wokuqala wase-Italiya we-Airbus A350
Imveliso ye-umbilical stem cell cell ngoku yamkelwe yi-FDA
IsiXeko esitsha saseBelfast sisiya eBirmingham ngenqwelomoya kwiFlybe yasungulwa
Idatha entsha kwi-Alzheimer's kunye ne-Parkinson's...
Amaqabane eSeychelles kwezoKhenketho kunye neNkongolo ye-MALT ngenxa yayo...
Iingcali zeHorizon Air ziqinisekisa isivumelwano esitsha seminyaka emibini
I-WTTC Yazisa iSaudi Arabia njengendawo yokuSingisela elandelayo
IAlaska Airlines isungula inqwelomoya entsha enemixholo ye-Star Wars
Isitayile saseSaudi Arabia Siba sisiTrendi esitsha soKhenketho
Isikhokelo esifutshane malunga nokuba kutheni kufuneka ukhethe iDatha ebonakalayo...
Iinqwelomoya ezintsha ezisuka eToronto zisiya eChicago, eBarcelona...
Imakethi yePolyurea Coatings ifikelela kwi-1500 yezigidi zeedola...
Uzakuzo wase-US ulumkisa abantu baseMelika eRussia malunga nobugrogrisi…
Ngaba uyafuna ukufunda phesheya? Amazwe ali-10 aphezulu kwezemfundo...
Iwayini yaseBordeaux: I-Pivot esuka ebantwini ukuya emhlabeni
Uneyure enye kuphela yokuCima uMbane wakho